🥇 ▷ Samsung: Dallac-gacmeedkan wireless-ka ah wuxuu isku mar ku dallaci karaa Galaxy Note 9 iyo ... Galaxy Watch! ✅
Samsung: Dallac-gacmeedkan wireless-ka ah wuxuu isku mar ku dallaci karaa Galaxy Note 9 iyo … Galaxy Watch!
Xaqiijinta cusub ee magaca Samsung smartwatch-ka cusub iyo taakuleynta ku-dallaca bilaa-waayirka ah.
Qalab Samsung oo aan horay loo arag, ayaa ku mahadsan shaqada shaqada had iyo jeer lagu kalsoonaan karo baxsiga Roland Quandt, ayaa laga yaabaa inay runtii joojisay calaamadaha su’aasha ku saabsan magaca smartwatch cusub ee soo saaraha Kuuriyada. Haddii horey dhowr maalmood ka hor ay jiri jireen kuwa dhaarta in saacadda soo socota ee Samsung loo yeeri doono Galaxy Watch, hadda waxaad moodaa inaan shaki dambe jirin.
Sanduuqa of Samsung Wireless Charger Duo – Djajaar cusub oo labajibaar wireless ah – magac gaar ah Galaxy Watch, oo ay weheliso qaab shaxeed oo casri ah oo leh qaab wareegsan. Xaraashka ayaa awood u leh inuu ku dallaco laba taleefanno gacmeed isla mar ahaantaana, ama taleefanka casriga ah iyo Galaxy Watch, oo sidaas darteed lagu qalabeyn doono heerka caaminta laqabsashada.
AKHRISO: Galaxy Note 9: tani waa waxa ay Bluetooth S-Pen cusub awoodi doonto
Magaca Galaxy Note 9 uma muuqdo mid si cad u muuqda, laga yaabee maxaa yeelay maahan taleefanka casriga ah ee Samsung oo keliya inuu taageero kicinta bilaa-waayirka, laakiin waxay umuuqataa wax iska cad in qalabka cusub la bilaabi doono mudada casriga cusub ee casriga ah iyo 2018 smartwatch. Samsung iman doona suuqa, ama inta u dhaxaysa dhamaadka bisha Agoosto iyo bilowga Sebtember. Qiimaha? Waxay umuuqataa inay ku kici doonto 55 rodol, taasi waa qiyaastii € 62.
Kani waa Samsung Wireless Charger Duo (EP-N6100) oo loogu tala galay Galaxy Note 9. Wuxuu kuxarayaa taleefishinka ‘Galaxy Watch’ taleefanka. pic.twitter.com/VnP10xAhvb
– Roland Quandt (@rquandt) Luulyo 21, 2018
Dhanka: Booliska Android